Sawirro: Carruurtii Ciidanka Mareykanka Ka Qafaasheen Deegaanka Jilyaale Oo Xaalad Adag Ku Sugan.
Tuesday January 23, 2018 - 13:42:48 in Wararka by Super Admin
Xaalad nololeed oo aad u adag ayay wajahayaan carruurrtii wax ka baranaysay Machadka sharciga deegaanka Jilyaale ee gobolka Sh/dhexe balse dhawwaan ay qafaasheen ciidamo Mareykan ah iyo maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka.
Xerada Xalane ee duleedka magaalada Muqdisho ayay saraakiisha Mareykanka waxay diyaarado ku geeyeen tobaneeyo carruur ah oo jimcihii lasoo dhaafay lagasoo qafaalay deegaanka Jameeco Jilyaale.
Carruurta qaar oo xaaladooda caafimaad ay aad uliidato ayaa ladhigay xarumo caafimaad oo ay gacanta ku hayaan ciidamada shisheeye, ilo wareedyo ayaa sheegaya in carruurta aan lasiin raashin ku filan taas oo keentay in xanuunno kusoo boodaan.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Saraakiisha ciidamada shisheeye ee Xalane ku sugan ay qaar kamid ah carruurta geliyeen xabsiyo adag halka kuwa kale loogasoo tagay xerada Balidoogle oo ciidamo Mareykan ah gacanta ku hayaan waxayna lakulmayaan jirdil iyo ciriiri gelin.
Sawirro lagasoo qaaday carruurta qafaalan ayaa muujinayay iyagoo isbitaal ku dhax jira oo xaaladoodu liidato, Carruurtan oo kasoo jeeda Beesha Gaaljecel gaar ahaan jufada Barsame ayaa gacanta lagusoo dhigay iyagoo hurdaya halka kuwa kale iyo macalinkoodi ay toogasho ku dileen ciidamada Mareykanka.
Wasiirka Warfaafinta ayaa maalma ka hor sheegay in ay weerar ka fuliyeen saldhig melleteri oo ay leedahay Al Shabaab ayna gacanta kusoo dhigeen dhalinyaro tababar usocday warkaas oo ahaa been aan sal iyo raad laheyn goobta ay weerareena waxay aheyd Machad culuumta shareecada lagu barto oo ay lahaayeen dad shacab ah, Hay'adda HRW ayaa horay u bogaadisay in la baabi'iyo macaahidda islaamiga ah ee carruurta lagu baro diinta islaamka oo ay ku sifaysay goobo 'Xagjirnimada lagu barto'.
Dagaalka ka socda Soomaaliya ayaa ah mid ashahaadda ladirir ah oo cadawgu ku doonayo in uu dadka ugu diido in shareecada islaamka isku maamulaan ayna bartaan wixii Jameeco Jilyaale ka dhaca iyo warbixinadii kasoo baxay Mareykanka ayaana tusaale u ah arrintaas.